निर्मला पन्तको हत्या हुँदा कहाँ थियाै कामरेड ? – नेपाली संगसार
भुवन के.सी calendar_today १२ पुष २०७७, 3:44 pm
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले ससंद विघटन गरेपछि सडक आन्दोलन गरि ‘हामी यहाँ छौ’ भन्दै सडकमा देखिएका केहि कमरेडहरु हिजोआज सामाजिक संजालमा भाईरल छन, नहुन पनि किन?
हिजो जनताले सरकार कता छ ? भनेर खोज्दा चुपचाप कानमा तेल हालेर बसेका कमरेडहरु, आज एक्कासि यसरी सडकमा देखापर्दा सत्ता स्वार्थका लागि सडकमा आउन कुन नैतिकताले दिन्छ ?
उखु किसानहरु न्याय खोज्दै सडकमा पुग्दा केपी ओली सहित प्रचण्ड र माधब ज्युहरु संगै कानमा तेल हालेर बस्नु भएको होइन ? आज तिनै किसानहरुको सडक कसरि प्यारो भयो ?
देशमा भ्रष्टाचार भैरहदा,देशको सिमामिचिदा, हत्या हिँसा बलात्कार हुँदा, बिरोधको लागि हामी यहाँ छौ भनेर सडकमा आएको भए जनताले तिम्रो विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला हैन ? महाशय ! आज सडकमा आउनुपर्ने कारण के ? भोलि सत्तामै पुग्नको लागि होइन र ? गन्तव्य सडक होइन गन्तव्य त सत्ता हो तिम्रो महाराज ?
नत्र किसानहरुले बर्सो बर्ष देखि आफ्नो मेहनत परिश्रम र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको बस्तु तथा सेवाहरुको भुक्तानी मुल्य खै ? बिचारा किसानहरुको सडकको बाँस छ, नत खाने गाँस छ, नत ओढ्ने कपास छ ।
कंचनपुरकि निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म कहाँ छ ? बालात्कृत पीडितलाई न न्याय छ, नत न्याय दिलाउने न्यायालय छ। तपाई अधिनायकवादिहरुलाई सत्ताको मोह छ। देशमा भैरहेका बिकृति बिसंगती तिर कमरेड महासयहरु कसैको ध्यान छ? आज देश संकटपुर्ण अवस्थामा गैरहेको छ तिमि कोहि महाराजहरुलाई थाहा छ। तिमीलाई न देशको चिन्ता छ न देशमा बसोबास गर्न नागरिकहरुको चिन्ता छ, तिमीहरुलाई चिन्ता छ त आफ्नो कुर्सी अनि पदको छ।
सडकमा आउँदा पनि तिम्रो कालो कोट छ कत्तै कोटमा धुलो लाग्ला भनेर चकटिको ब्यवस्था छ । यो महाराजहरुको नाटक हामी जनता सबैलाई थाहा छ, तपाईका बहानाबाजीहरु उहिले देखि नै चल्दै आई राखेको छ। पालो सबैको आउदो रहेछ जे गरेपनी सबै सत्ता र कुर्सीकै लागि रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भैसकेको छ।
तिमीलाई लुट्न नपाएर यस्तो छ कमरेड, बिचारा जनताहरुलाई तिम्रो भाषन अनि चर्तीकला देख्न मै ठिक्क छ, गाउँ गाउँमा सिहंदरबार बनाउछौ भन्ने तिम्रो अभियान कता छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बनायौ, तपाईका झोलेहरुलाई लुट्न अनि भ्रष्टाचार गर्नमै ठिक्क छ । केही गरौंला भनेर बिश्वास गरेर जनताले दिएको बहुमतको अपमान छ, अनि ‘हामी यहाँ छौ’ भनेर देखाउन लायकको तपाईको अनुहार कहाँ छ ?
अहिले यहाँ रहेछौ महाराज निर्मला पन्तको हत्या हुँदा जनताहरु सडकमा आई आन्दोलन गरि न्याय माग्दा कहाँ थियौ ? ३३ किलो सुन काण्ड हुँदा, वाईडबडी भ्रष्टाचार हुँदा, बालुवाटार जग्गा प्रकरण हुँदा सेक्युरिटी प्रीन्टिङप्रेस खरिद काण्ड हुँदा, मेलम्ची ठेक्का काण्ड हुँदा यस्ता थुप्रै काण्डहरु भएका थिए, त्यतिबेला बेला कहाँ थियौ त कमरेड ?